SAWIRRO :Banaanbaxyo rabshado wata oo ka dhacay dhulka reer Falastiin
Bannaanbaxyo rabshado wata, ayaa ka dhacay dhulka Falastiiniyiinta ee Israel xoogga ku haysato, ka dib markii Mareykanka uu Magaalada Qudus u aqoonsaday inay tahay Caasimadda Israel.
Dadka reer Falastiin, ayaa waxay bilaabeen shaqo joojin, iyadoona ay albaabada u laabeen goobaha ganacsiga iyo waxbaraashada, si ay kaga falceliyan go’aanka Mareykanka uu Qudus ugu aqoonsaday Xarunta Israel.
Bannaanbaxayaasha, ayaa wadooyinka ku gubay taayeero, sidoo kalena waxay dab qabadsiiyeen calamada Mareykanka, Israel iyo weliba sawirada Madaxweynaha Mareykanka iyo Ra’iisal Wasaaraha Israel.
Bannaanbaxayaasha, ayaa dhegxaan ku tuurayay askarta Israel, waxaana la arkaayay askarta Israel uu ku jawaabeysa sunta dadka ka ilmeysiisa iyo weliba rasaas, dad badan ayaana la sheegay inay ku waxyeeloobeen isu dhacaasi.
Hay’adda Bisha Cas ee Falastiin, ayaa waxay sheegtay in tiro ku dhow konton qof oo Falastiiniyiin ah ay ku dhaawacantay rabshadihii maanta dhex maray bannaanbaxayaasha iyo askarta Israel.
Bannaanbaxyada ka bilowday Daanta Galbeed, ayaa la fillaya inay sii socdaan, maalinta berrito ahna waxaa lagu wadaa in kumanaan ruux isugu soo baxaan Ramallah iyo Gaza.
Dhaqdhaqaaqa Falastiiniyiinta ee Xamaas, ayaa ku baaqay kacdoon ka dhan ah tallaabada Donald Trump uu Safaaradiisa ugu wareejinayo Magaalada Qudus, ka dib markii uu sheegay Qudus inay tahay Caasimadda Israel.
Dhanka kale bannaanbaxyo looga soo horjeedo go’aanka Trump ee ku aadan Qudus, ayaa maanta ka kala dhacay Wadamada Jordan, Masar iyo Pakistan.
Madaxweyne Trump, ayaa Arbacadii amray in Safaaradda Mareykanka laga raro Magaalada Tel Aviv, loona wareejiyo Magaalada Qudus, taasoo ka careysiisay dunida Muslimka.